कोरोनाले थलिएको मुम्बईलाई वर्षादको थप चोट ! « Media for all across the globe
कोरोनाले थलिएको मुम्बईलाई वर्षादको थप चोट !
मुम्बई । मुम्बई । लगातारको वर्षाका कारण भारतको मुम्बई जलमग्न भएको छ। अहिले जताततै पानी नै पानी देखिन्छ। केहि दिनदेखि मुम्बईलगायत अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ। भारी वर्षाका कारण मुम्बईको जनजिवन प्रभावित बनेको छ। यहाँका प्रायः शहरहरु वार्षिक रुपमा डुवानमा पर्दछन्। वर्षादको समय हुँदा मुम्बई क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने गर्दछ। हरेक वर्ष आकाशे पानी नियन्त्रण गर्न जनशक्ति प्रयोग गरेपनि अहिलेसम्म काम प्रभावकारी देखिएको छैन।
यतिबेला रेलमार्ग, सडक, शहरका गल्लीलगायत मुम्बई चारैतिर डुबानमा परेको छ। सडकका खाडलहरु पोखरीमा परिणत भएका छन् भने रेलमार्ग नाला जस्तै देखिन्छन्। मुम्बईको जनजिवन कोरोना भारइसका कारण थलिएको छ। त्यसमाथि पछिल्लो भारी वर्षाले थप चोट दिएको छ।
नगरपालिका, महानगरपालिका तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारले अनिवार्य काम बाहेर मानिसहरुलाई घर बाहिर नजान निर्देशन समेत दिएको छ। सरकारले यस्तो निर्देशन दिएपनि हजारौं मानिसहरु घर बाहिर आउँनुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ। किनकी, पानीले उनीहरुका घरहरु भरिएका छन्। वर्षादसँगै यस क्षेत्रमा तिब्र समुन्द्रीक हावाहुरी समेत चल्दछ। मुम्बई, ठाणे, मीरा–भाईंदर, विरार, नालासोपारा र वरपरका मानिसहरू प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण दुःखी जीवन बिताउने गर्दछन्।
“यो कुनै दुर्घटनागत चीज होइन। अधिक बार प्रत्येक वर्ष पानी पर्छ। कहिलेकाँही यो प्रकोपको रुपमा समेत परिणत हुन्छ। प्रशासनले पहिल्यै सचेत बनाएको भए मुम्बईमा अहिलेको जस्तो अवस्था आउँने थिएन”- स्थानीय गंगाप्रसाद भट्टराई भन्छन्। यतिबेला मुम्बईमा सम्पूर्ण व्यवसाय ठप्प छन्। पूर्वाधारहरु बाढीले ध्वस्त बनाएको छ। मुम्बई आर्थिक रुपमा बलियो भएतापनि बाढीको नियन्त्रणमा भने निकै कमजोर देखिन्छ। लापरवाही र दूरदर्शिताको कमीले मुम्बईवासी हरेक वर्षादमा पीडा भोगिरहेका हुन्छन्।